musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Sandals® Resorts Inopemberera Makore makumi mana nekuDzorera kumashure iyo Clock
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Culinary • tsika nemagariro • Curacao Kuputsa Nhau • Entertainment • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Shangu Makore makumi mana
Sandals Resorts inoenderera mberi nemhemberero yayo ye40th Anniversary pamwe nekutengeswa kwemazuva makumi mana pane yakasarudzika maSandals Resorts anosanganisira iyo yemahara flagship chivakwa, Sandals Montego Bay. Vakaroorana vanochengetera kugara kwehusiku hunomwe kana kupfuura kwenguva yekufamba chero nguva pakati paChikunguru 40 kusvika Gumiguru 31, 2, ichavhura yakasarudzika kamuri mwero wemadhora mazana maviri pamunhu, husiku humwe kunzvimbo dzinotora nzvimbo.
Zvakafanana nekudzokera kuma80s semaSandals Resorts anopemberera makumi mana emakore muindasitiri.
Iyi yakasarudzika mhemberero ichaitika kune ese maSandals Resorts, kubva kuJamaica kuenda kuBahamas, Saint Lucia, neCuracao, nezvimwe.
Pachave nemapato akafuridzirwa epamadziva e1981, macocktails akagadzirwa nemaoko, mutsetse wekupfeka wevintage, uye fungidzirwazve mamenu ekushambira.
"Kutengesa kunoshamisa uku kuchaita kuti vatinopa mazano vezvekufamba uye maSandals Loyalty Vashanyi vachifunga kuti ndiwo 'makore makumi masere zvekare," akadaro Gary Sadler, Mutevedzeri Wemutungamiriri weMutungamiri Sales & Industry Relations yeUnique Vacations Inc., mubatanidzwa wevamiriri venyika dzeSandals Resorts. International.
Sandals Resorts 40-Day Anniversary Sale inotenderwa kubhuka kwemazuva makumi mana kusvika Mbudzi 23, 2021, uye inowanikwa munzvimbo dzinotora nzvimbo dzeSandals Resorts dzinosanganisira Sandals Montego Bay neSandals Ochi Beach Resort muJamaica neSandals Halcyon Beach Resort muSt. Lucia.
Shangu 40th Anniversary mhemberero ichaitika kune ese maSandals Resorts. Vashanyi vanogona kurova kumashure uye nekunakidzwa nostalgic nemapoka akafuridzirwa e81 akafuridzirwa, mutsetse mutsva wevintage vhezheni, yekufungidzira yekushambira-kumusoro mamenu ebhawa, jakoni nyowani dzakagadzirwa nemaoko uye nezvimwe zvakawanda. Vashanyi vachakwanisawo kujoina Sandals Foundation uye kubatsira ita mutsauko munharaunda dzenharaunda dzeCaribbean kuburikidza ne40 itsva ye40 Initiative iyo inounza makumi mana emamwe mapurojekiti kunharaunda yega yega yechitsuwa.
Ndichidzosera kwarakatangira kwese Shangu Montego Bay, vashanyi vanogona kuona zvimwe zvezviratidzo zvemhando yepamusoro zvinosanganisira Swim-Up Suites, pamusoro pemvura mabara, Over-the-Water Wedding Chapels nezvimwe.
Vaviri vanosarudza kuenda kuzororo kuSandals Ochi, padivi pemahombekombe ekuchamhembe kweJamaica, vanogona kunakidzwa nemari yemubhadharo yakasvibirira uye kuendesa kuSandals Golf uye Country Club pamwe nesarudzo gumi neshanu dzakasiyana dze16-Star Global Gourmet ™ yekudyira. Vashanyi paSandals Halcyon Beach Resort vanogona kunyudza mukuzorora kwakazara muSt. Chero ipi vashanyi vashanyi vanosarudza kuisira yavo "40th Anniversary Special ”imba ine, ivo vanozove chikamu chemhemberero yemakore makumi mana erudo uye kuvimba.
Mimwe mirawo nezvirambidzo zvinoshanda. Kugovera yakasarudzika makumi manath Anniversary Kutengeswa pane sarudza Sandals Resorts, ndapota shanya sandals.com. Kuti udzidze zvakawanda nezve maSandals Resorts ari kupemberera ayo makumi manath Chiitiko, ita shuwa yekushanya shangu.com/celebrating-40-years.